Anteennada Gudbinta FM, Anteennada Kala-soocidda Wareegta, Anteennada FM Range Long
Waxaan muhiimad weyn siinaa dalabaadka jumlada. Kadib amarrada soo baxa, qaybaha si toos ah ayaa loo ururin doonaa, si looga fogaado khaladaad kasta oo la sameeyo inta lagu jiro wax-soo-saarka, waxaanu waydiisan doonaa warshadda inay hubiso kulanka, taas oo macnaheedu yahay sabuuradda, kiis, guddi, iyo midab, iwm. .
Ka dib markii si isdaba joog ah loo hubiyo oo loo xaqiijiyo in aysan jirin wax laga tagayo iyo khaladaadka ku jira qaybaha asaasiga ah ee alaabta, farsamayaqaankeena RF ayaa awood u siin doona alaabta si uu u eego haddii uu shaqayn karo. Oo ay ku jirto in si caadi ah loo shidi karo? Ma buuq ayaa jiri doona marka mishiinka la bilaabo? Marwaxada qaboojinta mishiinku si fiican ma u shaqaynayaa? Haddii badhanka maqalka ee soo noqnoqda la isticmaali karo ama aan la isticmaali karin, iyo wakhtiga dhabta ah xogta duubista si loo hubiyo tayada alaabta. Tijaabada gabowga ee 72-saac ee warshadii hore ee alaabta la soo ururiyey ayaa sidoo kale la bilaabayaa si loo hubiyo haddii wax dhibaato ah oo gabowga ahi ay ku dhacaan alaabta dhamaadka xaaladaha deegaanka caadiga ah.
Qalabka tijaabada ah ee aan isticmaalno dhammaan waa qalab sax ah oo sarreeya, kuwaas oo hawlahooda ay ka mid yihiin Imtixaanka VSWR, tijaabada tamarta, tijaabada awoodda wax soo saarka, tijaabada qaabka shaqada, tijaabada miisaanka, iwm.
Tijaabada muunada ka dib, warshadeenu waxay alaabta si taxadar leh ugu xidhi doontaa suuf luul ah, sanduuq jiingado ah, iyo suunka xidhitaanka si loo hubiyo in alaabtu aanay saamaynaynin saamaynta, qoyaanka, iyo heerkulka sare inta lagu jiro gaadiidka.
Ka dib markaan hubinno tirada alaabta iyo ciwaanka iibsadaha, waxaanu samayn doonaa ballan qaadis saadka ugu dhaqsaha badan.
Marka la eego tayada badeecada, waxaanu kuu xaqiijinaynaa tayada ugu fiican ee qalabkayaga baahinta. Ka hor inta aan la baakadin alaabooyinka, sida caadiga ah, waxaa jira saddex tallaabo oo muhiim ah oo soo saarista alaabta, kuwaas oo ah marka hore, qaybaha alxanka. Waa mid ka mid ah tillaabooyinka ugu muhiimsan ee geeddi-socodku, sidaas awgeed waxaan muhiimad weyn siin doonnaa tallaabo kasta oo yar oo ka mid ah. Talaabada xigta ka dib qaybaha alxanka waa in la isu keeno loox la dhammeeyey shassis iyo in la sugo in la tijaabiyo si loo arko haddii codku uu si weyn u shaqeynayo. Talaabada ugu dambeysa waa in la sameeyo tijaabada gabowga hore ee alaabooyinka la soo ururiyey si loo hubiyo in wax dhibaato ah oo gabowga ahi ay ku dhacaan alaabta dhamaadka leh xaaladaha deegaanka caadiga ah.